संघीय संसदमा आज कस्तो बजेट आउला! सबैतिर चासो - Nepali Online News Media-shikharnews.com
संघीय संसदमा आज कस्तो बजेट आउला! सबैतिर चासो
२०७५ जेठ १५ मंगलवार
काठमाडौँ, १५ जेठ – आज सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को पूर्ण संघीय बजेट ल्याउँदैछ । सरकारले आज कस्तो बजेट ल्याउँछ भन्ने सबैतिर चासो विषय बनेको छ । आज अपराह्न ४ बजे संघीय संसद्मा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ ।
संघीय संसदमा पहिलो पटक पूर्ण बजेट आउन लागेको हो । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठक हुनेछ । प्रत्येक वर्ष जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
संविधानको धारा ११९ मा अर्थमन्त्रीले प्रत्येक आर्थिक वर्ष १५ जेठमा राजस्व र व्यय अनुमान प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
गत मंसिर १० र २१ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव भएको थियो । त्यसैगरी माघ २४ गते राष्ट्रियसभाको चुनाव भएको थियो । त्यसपछि केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको वाम सरकारले पहिलो पटक संघीय संसदमा बजेट ल्याउन लागेको हो ।
यस वर्ष केन्द्रीय बजेटले स्थानीय तथा प्रदेश तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँडसहितको बजेट आउँदैछ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले निर्धारण गर्ने सूत्रअनुसार वित्तीय हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँड हुनेछ ।
वाम सरकारले कस्तो खालको बजेट ल्याउँछ भन्ने सबैले चासोका साथ हेरिरहेका छन् ।